Allgedo.com » 2012 » October » 02
Home » Archive Daily October 2nd, 2012
Dhabad oo loo magacaabay in ay noqoto Degma buuxda (Arag Dakereetada madaxweynaha iyo Dekumantiyo kale)
Dhabad oo horay u ahaan jirtay Tuulo hoos tagta Degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxay hadda noqotay Degma buuxda kaddib markii ay dowladdii Shariif Sh. Axmed ee uu waqtigeedii dhamaaday ay Dhabad u aqoonsatay in ay buuxisay dhamaan shuruudihii looga baahnaa Degmo, sidaas awgeedna sida ku cad Dakareetada uu madaxweynaha saxiixay ee hoose, Dhabad waxaa in ay Degmo noqoto loo aqoonsaay July...
Allgedo waxay u baahan tahay wariye khibrad fiican leh (Akhri shuruudaha)
Shabakadda AOL waxay u baahan tahay wariye khibrad fiican oo wariye-nimo leh. Shuruudaha looga baahan yahay wariyaha ka howl gali doona Allgedo ayaa ah kuwa soo socda: 1. In uu yahay wariye khibrad fiican leh. 2. In uu si fiican wax ugu qori karo una akhrin karo luuqadda Soomaaliga, haddii uu luuqad kale yaqaanana way kasii fiican tahay. 3. In uu yahay qof awoodi kara haddii loo baahdo in soo diyaarin karo ...
Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaayo oo maanta booqasho ku tagay Baladweyne
Baladweyne, Somalia (AOL) – Madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xassan Sh. Maxamuud iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminaayo ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baladweyne. Wafdiga uu madaxweynaha hogaaminaayay oo uu ka mid yahay Guddoomiyaha Baarlammaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne si diiran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin...